EU's new banking union will break the link between banks and public debt
जनताको चाहना अनुरुप प्रजातान्त्रिक संबिधान निर्माण गर्न असक्षम भै संबिधान सभाले मृत्यु वरण गरेको दुई महिना भन्दा बढि समय व्यतित भैसक्दा समेत विद्यमान संबैधानिक एवं राजनैतिक संकटको निकास निस्कन सकेको छैन । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मंसिर ७ गतेको निमित्त घोषणा गरेको संबधिान सभाको निर्वाचन तोकिएको समयमा नहुने अब निश्चित भएको छ । अब निर्वाचन कहिले हुने हो कुनै ठेगान छैन ।
राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकार काम चलाउ भएको घोषणा गर्नु भयो । तर काम चलाउ सरकार कहिले सम्म कायम रहने हो तथा नंया सरकार कहिले र कसरि बन्ने कुनै निश्चितता छैन । यसै बिच मुलुकको आर्थिक र सामाजिक स्थिति क्रमशः कमजोर बन्दै गै रहेको छ । बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तिव्र रुपले बढेर गएको छ । जातीय र साम्प्रदायिक विद्वेष भुसको आगो जस्तै कुनै पनि बेला बिस्फोट हुने तयारिमा रहे झै देखिन्छ । भ्रष्टाचार, गरिबी र बेरोजगारि समस्याबाट आम जनता आक्रान्त बनेका छन् । राष्ट्रिय अखण्डता र नेपाली पहिचान गंभीर संकटमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रलाई संकटबाट जोगाउनु पर्ने दायित्व बोकेका संस्थाहरु अत्यन्त कमजोर रहेका छन् । प्रशासनिक संरचना र सुरक्षा अंगहरुको प्रभावकारितामा व्यापक ह्रास आएको छ । संबैधानिक अंगका पदहरु धमाधम रिक्त हुंदै छन्, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधिशहरुको पदावधि समाप्त हुंदै छ । ति पदहरुमा नियुक्तिको संबैधानिक व्यवस्था अवरुद्ध भएको छ । संबैधानिक अंगहरु पदाधिकारि विहिन हुने अवस्था बन्दैछ । डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनु भएको पांच वर्ष पुग्न लाग्दै छ, तर उहां कहिले सम्म पदमा बहाल रहि रहने हो स्पष्ट छैन । स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन भएको बाह्र वर्ष पुग्न लाग्यो । अन्तरिम संबिधानले नंया संबिधान नै नबनाई संबिधान सभा भंग हुने परिकल्पना समेत नगरेको हुंदा हाल कायम रहेको संबैधानिक जटिलता र संकटको समाधान दिन अन्तरिम संबिधान स्वयं असफल देखिएको छ । यस्तो अन्यौल, अस्थिर र अराजक अवस्थाले अझै केहि समय निरन्तरता पाउने हो भने नेपाल असफल राष्ट्रमा परिणत हुनु अबश्यंभावि छ । यो कटु यथार्थ तर्फ देशका राजनैतिक दलहरुको गंभीर रुपले ध्यान केन्द्रित हुन सकेको देखिन्न ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गत श्रावण २१ गते आयोजना गर्नु भएको सर्वदलिय बैठकमा आफुलाई प्रमुख भनि दम्भ गर्ने राजनैतिक दलका नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा म आश्चर्य चकित भएको छु । संबिधान सभा भंग भएर ठूलो संबैधानिक र राजनैतिक रिक्तताको स्थिति खडा भै सक्दा पनि उनीहरुमा अलिकता पनि जिम्मेवारि वोधको अनुभव देखिएन । संबिधान निर्माण गर्न असफल भएको अपराध बोधको कुनै झलक सम्म पनि देखिएन । स्वयं राष्ट्रपति उपस्थित बैठकमा आपसमा आरोप प्रत्यारोपमा नै माओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरु केन्द्रित रहे । पार्टीगत स्वार्थबाट प्रेरित पुरानै अडान र धारणालाई दोह¥याउने काम गरे । सहमतिको विकल्प छैन भन्दै आफ्नो स्वार्थको पृष्टपोषणमा नै प्रतिवद्ध देखिए । अर्कमण्यता, गलत नीति र सप्तालिप्साबाट राष्ट्रलाई धरापमा पार्ने कथित प्रमुख दलका नेताहरुले राष्ट्रपति समक्ष समेत सत्तामोहको खुला प्रदर्शन गरे । देश असफल राष्ट्रमा परिणत भएमा राज्य संचालनमा मुलुक भित्रका आन्तरिक शक्तिहरु, अझ खासगरि राजनैतिक दलहरुको भूमिका संकुचित हुने वास्तविकता तर्फ समेत प्रमुख दलका नेताहरु सचेत रहेको देखिएन ।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा राष्ट्रलाई संभावित दुर्घटनाबाट जोगाउन तथा स्थिरता, प्रजातन्त्र र सम्वद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न आम जनता नै फेरि एक पटक आन्दोलित हुनु पर्ने टडकारो आबश्यकता छ । चुनाव नै संकट समाधानको तात्कालिन उपाय हो । त्यसर्थ चुनावलाई नै यथास्थिति र असफलताबाट मुक्तिको बाटोको रुपमा जनताले प्रयोग गर्नु पर्दछ । तर, हाल सम्मको अवस्था र प्रमुख भनिने दलहरुको नियत र अडान हेर्दा निकट भविष्यमा चुनावमा जान माओवादी, कांग्रेस र एमाले तयार होलान जस्तो देखिन्न । जनतालाई धोका दिएका कारणले गर्दा उनीहरु जनता समक्ष जान डराई रहेका छन् । चुनावलाई सामना गर्न उनीहरु चाहन्नन् । यदी चुनाव हुन दिईएन भने अर्थात जनताको अधिकार खोस्ने प्रयास गरियो भने परिवर्तनको लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त जनसंघर्ष बाहेक अर्को विकल्प रहन्न । यसका निमित्त भौतिक, मानसिक एवं आर्थिक रुपमा समेत जनता सजग रहनु पर्दछ । जनसंघर्षलाई नेतृत्व गर्न राप्रपा नेपाल तयार छ ।